Izidingo ezibalulekile ezi-3 zanoma isiphi isicelo seWebhu | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 1, i-2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ngokuya ngokwengeziwe, ngizithola ngibuza abathengisi nezinkampani imibuzo efanayo kaninginingi. Uma ucabanga ngokwakha uhlelo lwakho lokusebenza, lezi yizici ezi-3 ezidinga ukuhlanganiswa kusukela ngosuku lokuqala kuhlelo lwakho lokusebenza uma ufisa ukonga izinsiza ngokuhamba kwesikhathi.
Ngabe isicelo sakho…
Yiba API? Akudingi ukuthi kube okukhethekile noma insiza yewebhu… noma iyiphi i-olL plain XML ezokwenza. Sizofuna ukuyihlanganisa nesicelo sethu ngolunye usuku ukuzenzekelayo futhi senze kube lula kumakhasimende ethu ukuphatha ukuba nobuchwepheshe obuningi. Ukube bengizoqala ukufaka isicelo namuhla, bengizosebenza kusuka ku- API ngaphandle, ngikhathazeka nge-interface yomsebenzisi ngemuva… mhlawumbe ngisho nokuhlanganiswa kwe-UI nge API ukuqinisekisa ukuthi siyakhe kahle ngokwanele.
Yiba nesici se-ejensi? Sifuna ukuthengisa amaklayenti ethu kuhlelo lwakho lokusebenza, kepha singathanda ukukwazi ukuwaphatha. Nasi isibonelo: Kungani ababhalisi besizinda bengenawo ama-Akhawunti Akhawunti lapho iklayenti lingagcina ubunikazi besizinda, kepha i-Agency ingaphatha… futhi ikhokhele nokubhaliswa… Ngibhalise umbhalisi wami kulobubusuku futhi ngancoma lokhu.
Yiba nesici sebhizinisi? Izinkampani eziningi ngokwengeziwe zingamaqoqo nje amancane. Ukubika kufanele kuhlanganiswe emazingeni amaningi njengenhlangano. UMongameli Wokuhlukaniswa kwe-VP kuMphathi Wezifunda ku-Akhawunti… wonke umuntu kufanele akwazi ukuba nezimvume zokufinyelela kanye nokubika okufingqiwe kunoma yiliphi izinga eliphakathi.
Izidingo ezijwayelekile zokwenza lokho okudingayo kanye nezidingo zokuphepha zihlala zisebenza; kodwa-ke, izidingo engizisho ngenhla zivame ukunganakwa noma ukufakwa emuva emuva okuzothuthukiswa kamuva. Bavimba ukuqoqa uthuli ngemuva, njengoba kwenza isoftware yenkampani yakho.
Ukube bengiyibhizinisi lobuchwepheshe bezezimali iVenture Capitalist emhlabeni weWeb 2+, lokhu bekungaba izidingongqangi zami. Uma okungenani ungahleleli lezi zici, ngikholwa ukuthi bengizothatha imali yami kwenye indawo. Uma ngiyithemba, ngivame ukwenza njalo.
Tags: Ikhodidesign infographicsthola abathonyaamafontiGoogle +iframei-iframe breakeriphrojekthi templatewebsI-wordpress login
Jul 2, 2008 ku-8: 46 AM
Umbono wakho wesici se-ejensi sokubhaliswa kwesizinda sihle. Yilokho kanye engikudingayo komunye wamaphrojekthi wami.
Jul 2, 2008 ku-9: 48 AM
Ngingasithanda ngokuphelele isici se-Agency. Ngigcina ithani lezizinda futhi ngingathanda ukwazi ukuthi isizinda sangempela sibhalisiwe egameni leklayenti lami nokho ngisengakwazi ukulawula i-100% ekuphathweni kwesizinda sabo. Ngicabanga ukuthi amaklayenti angakuthanda lokhu futhi aqede ukwesaba ukuthi abeluleki bangababamba ngamagama abo wesizinda uma ubudlelwano phakathi kwabo buba bubi.
100% bayavumelana nawe Doug, mayelana ne-API. ne-Agency feature… Umbono obabazekayo!. Izicelo zeWebhu = Ikusasa